Partner Connect / Soomaali
Iskaashi la yeelo Dugsiyada Dadweynaha Portland
Noqo afhayeen martida • Martigeli barnaamij shaqo • Noqo la-taliye
Xiriirka Iskaashi ee PPS waa qalab cusub, oo waalidiinta, qalin jabiyayaasha, iyo xirfadlayaasha u fududaysa in ay ku xirmaan macallimiinta K-12. Xirfadlayaashu waxay la wadaagi karaan xirfadahooda iyo khibradooda taasi oo ku saabsan xirfadahooda shaqo si ay fursadaha waxbarasho, oo dhab ah ugu keenaan ardaydeena iyo isla markaana ka caawiyaan abuurida dadka wax curiya ee jiilka soo socda. Ardaydu waxay u baahan yihiin macnaha guud ee waxa ay ku barayaan fasalka dhexdiisa iyada guud ahaan khibrada la xiriirta shaqadana aad ka caawin karto ardayda iyo macallimiintu in ay ku xirmaan dunida shaqada. Inaga oo wadajirna waxaan
KA QAYB GALIN KARNAA: Ardayda adiga oo la wadaagaya khibradaada
DIYAARIN KARNAA: Ardayda in ay diyaar u noqdaan kulliyad iyo shaqooyin
KU DHIIRIGELIN KARNAA: Ardayda si ay u qiyaasaan mustaqbal leh fursado badan oo la heli karo
Xiriirka Iskaashi ee PPS wuxuu taageero ka geysan karaa isku xirka khibradaada iyo aragtidaada lagu xirayo dugsiyada iyo ardayda ka tirsan bulshadaada. Qalabka sida fudud loo isticmaali karo wuxuu macallimiinta u saamaxaa in ay baahida waxbarasho ee ardayga barbardhigaan kuwa xirfadlayaasha ee leh xirfad shaqo oo buuxinayso codsigooda.
Riix badhanka Isqoridda isla markaana maanta xiriirkaaga samee